Xarunta softiweerka Ubuntu hadda waxaa laga heli karaa internetka | Laga soo bilaabo Linux
Un Xarunta softiweerka tooska ah leeyahay tiro badan faa'iidooyinka: Wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si loo ogaado codsiyada cusub inta aad on computer kale wuxuu jeeelyahay in la isticmaalayo nidaamka qalliinka kale, waxaad badbaadin kartaa khayraadka iyo rakibi barnaamijyo cusub toos uga soco barta internetka.
Bogagga codsigu waxay muujinayaan isla macluumaadka sida ku qoran nooca desktop-ka. Sharax kooban oo ku saabsan, shaashad la socota sharraxa iyo dib u eegista ay isticmaaleyaashu qoreen.
Haddii aad ka soo galayso nidaamka hawlgalka aan la taageerin, waxay ku siin doontaa xiriiriye si aad ugu soo dejiso Ubuntu barnaamijka aad aragto, laakiin haddii aad horay u isticmaaleyso Ubuntu ama nidaam la mid ah (oo ku saleysan Debian) markaa waad rakibi kartaa wax alla wixii aad rabto halkaas. Xaqiiqdii, waa APT taas oo ugu dambeyntii mas'uul ka ah rakibidda. Si kastaba ha noqotee, qaabkani waa mid wax ku ool ah oo aad uga fudud kan Xarunta Software, taas oo aan shaki ku jirin mid ka mid ah barnaamijyada ugu culus uguna gaabiska ah Ubuntu.
Tag Xarunta softiweerka tooska ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » Xarunta Software Ubuntu hadda waxaa laga heli karaa khadka tooska ah
opa weli ma aanan arkin laakiin waxay u egtahay adeegsi aad u furan sax?
Waad ogtahay inay aad uga fiicnaan lahayd haddii noocyada OS-ka kale la soo bandhigi lahaa, anigu wax faa'iido ah uma arko haddii aan ka helo Ubuntu waxaan hayaa siyaabo badan oo aan ku raadiyo waxa aan doonayo. Waxaan u fekerayaa sida isticmaale OS kale oo aan ahayn kuwa bilaashka ah, waxaan ku rakibi karaa codsiyada barnaamijkan iyo bulshada Linux oo dhan ay bixiyaan oo sidaas sifiican ugu faafiyaan softiweerka bilaashka ah.
Ku jawaab Alllzapa
Ioannes Daniel dijo
saaxiib sidee baan barnaamijyada uga soo dejisan karaa xarunta software-ka ubuntu khadka tooska ah illaa canaima 2.1
Jawaab Ioannes daniel
silsiladda facundo dijo
Kujawaab facundo silva
louis felix dijo
Tani waa war aad u wanaagsan. Waxaan hayaa kumbuyuutar kumbuyuutar oo kumbuyuutar ah oo aan haysan karo wax yar oo aan ku rakibi karin xarunta barnaamijka Ubuntu, laakiin hadda waxaan ku hayaa khadka tooska ah waa mid aad u fiican. Waa war wanaagsan softiweer bilaash ah oo ka socda wanaag iyo wanaag. Waad ku mahadsan tahay macluumaadka.
Jawaab Luis Felix
Adaa mudan! Si ka duwan!
fadlan soo dejiso
Waxaan rabaa in aan furo xarunta softiweerka ee canaima-kayga mana furna
Ku jawaab nilber
sideen u soo dejisan karaa xoq
Waa salaaman tahay, sidee u soo degsataa casiirka?
Waad salaaman tihiin, sidee buu furaha ereyga u soo dejistaa?
Waxaan rabaa oo kaliya inaan soo dejiyo raxan tux xad dhaaf ah iyo tux kart xad dhaaf ah
kiven Daniel dijo
ii oggolaan maayo inaan furo xarunta softiweerka ubuntu
Ku jawaab kiven daniel
aamminsan yihiin dijo
Waxaan hayaa xubuntu linux oo ku rakibtay pc-kayga si kadis ah ama sababo jira awgood waa la tirtiray dukaanka ubuntu waxaan haystaa kaliya astaanta mana furi karo. Waxaan rajaynayaa inaan u baahanahay caawimaad adna waad i siin kartaa jawaab, mahadsanid.
Adeeg farsamo dijo
Haa, waad tirtirtay xarunta softiweerka Ubuntu, waa inaad gashaa terminal oo aad qortaa 'sudo apt-get install software center' (xigasho la'aan) Waxaan rajeynayaa inay adiga kuu shaqeyneyso ... (;
Kajawaab Adeeg Farsamo
Waad salaaman tihiin dadka waxaan u baahanahay inaad iga caawisaan dhibaatada, waxaan haystaa daabacaad buuge ah pixma mg2910 laakiin ma u habeyn karo laptop-kayga, ma heli karo darawalada.
nidaamka qalliinka waa ubuntu.
Waxaan ka bilaabayaa Linux Ubuntu 16.04 mana heli karo "xarunta software-ka ubuntu". Sababta qaar awgeed ayaa looga saaray mana garanayo sida aan mar kale ugu rakibi karo.
Waxaan ku qortay "sudo apt-get install software center" dhamaadka, aniga oo aan helin xigashooyinka ay soo jeediyeen "Adeegga Farsamada" waxayna igu tuuraysaa khaladaadka soo socda:
pc- @ PC: ~ $ sudo apt-hel rakib xarunta softiweer
E: Xirmada barnaamijka lama helin
E: Xirmada xarunta lamaheli karo
Muxuu yahay boorar dhoobo ah oo aanan mar dambe rakibi karin?
Sidee kale ayaan markale u rakibi karaa?
Waxaan sidoo kale ka faa'iideystaa weydiinta sida aan u rakibo Camtasia (ama mid u shaqeeya isla).